State Counsellor, Irish Ambassador discuss bilateral relations, Rakhine issue – Ministry of Foreign Affairs
State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs, Daw Aung San Suu Kyi received Mr. Joseph Anthony Cotter, newly-accredited Ambassador of Ireland to the Republic of the Union of Myanmar at 11:15 am on 8 April 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw.
During the meeting, they exchanged views on matters pertaining to the promotion of bilateral relations and cooperation between Myanmar and Ireland and recent developments in Rakhine State.
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန်သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၈-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အသစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၈ ရက် ၊ ၁၁၁၅ နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-အိုင်ယာလန် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နောက်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။